Antananarivo - renivohitra : Nahazo vahana ny lozam-piarakodia -
AccueilSongandinaAntananarivo – renivohitra : Nahazo vahana ny lozam-piarakodia
Antananarivo – renivohitra : Nahazo vahana ny lozam-piarakodia
Teny 67 Ha, Anosy, Antsobolo Ambatomaro ary Manjaka Ilafy, no nisehoana lozam-piarakodia ny zoma lasa teo.
Nitohana ny fiara. Tsy mahagaga raha misy fitohanana lavereny ny fiara raha ny eto an-drenivohitra, satria efa dila hifarana ny fampielezan-kevitra. Andro vitsy sisa no ahafahan’ny kandidà isan-tsokajiny manentana ny olona hifidy azy. Noho izany nitohana tanteraka ny fifamoivoizana omaly, ary nahazo vahana ihany koa ny lozam-piarakodia.
Araka ny hita teny amin’ny tambajotran-tserasera sy ny angom-baovao, tafakatra efatra ny lozam-pifamoivoizana nitranga, tamin’io zoma io. Nitolagaga ny mpitazana raha nahita izany tranga izany. Toa ity fiara vaventy iray nandona Taksibe nitondra mpandeha. Olona efatra no fantatra fa naratra vokatry ny fifandonana, tokony ho tamin’ny 12 ora antoandro tany ho any. Araka ny angom-baovao voaray, taksibe sprinter mampitohy ny renivohitra sy ny kaomina sabotsy Namehana ity no nifandona teo akaikin’ny fidinana, akaikin’ny “Somacou” rehefa avy aty Antananarivo. Nifanehitra taminy avy hatrany ny kamio iray, nitondra lasakana simenitra izay efa tapaka hisatra. Mafy raha ny fifandonana tamin’izany, satria dia saika nilatsaka tany an-kady ny fiara, izay nahitana fahapotehana tokoa teo anoloany. Soa ihany fa nalaky tafavoaka ireo mpandeha, ka tsy nisy aloha ny namoy ny ainy teto raha toa ka nisy ihany ireo naratra izay efa nalefa eny amin’ny hopitaly.
Ankoatra izay, kamio iray hafa ihany koa no nanao hitsin-dalana teny Antsobolo Ambatomaro, ary avy dia nifatratra tamin’ny andrin-jiro teny an-toerana. Nivadika avy hatrany moa ity fiara ity rehefa nidona mafy tamin’izany. Tsy nisy kosa ny olona voakasika tamin’ity loza ity fa ny fatapahana vokatry ny fianjeran’ilay andrin-jiro no fahavoazana azon’ny mponina teny amin’ny manodidina. Na izany efa tonga teny an-toerana ny tompon’andraikitra eo anivon’ny jiro sy rano namerina izany amin’ny laoniny.
Môtô nifampisisika. Io no matetika antony hamoizan’ireo mpitondra môtô ny ainy tato ho ato.
Misongon-dalana ireo fiara, na taksibe eo alohany. Efa sorena noho izany ireo fiara fitaterana noho ny afitson’izy ireo, ka mahatonga ireny fifandonana fiara sy môtô mahazo vahana ireny. Vokatr’izay tsy fanarahana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana, izay saika isanandro no rè ny fifandonana miafara amin’ny fahafatesana teto an-drenivohitra. Teny Anosy sy 67 ha izao dia hita fa noho ny tsy fitandremana no nahatonga ny loza. Raha ny fitantaran’ireo nanatri-maso dia somary nalalaka kely ny lalàna dia raikitra ny fifanenjehana. Vokany, niteraka fianjerana izany rehefa nidona tamin’ny taksibe ireto farany. Saika nisy indray ny aina nafoy tamin’izany raha tsy nahatana ny hisatry ny fiara ny mpamily fiara taorian’ireto mpitondra môtô nitsirara teny afovoan’arabe ireto. Aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra amin’izao tranga izao eo amin’ny governemanta sy ny polisim-pirenena.
Mazava tsara ny voalazan’ny lalàm-panorenana fa fanjakana laika no misy eto amintsika, izany hoe fitantanan-draharaham-panjakana tsy hidiran’ny resaka fivavahana. Maro ireo fiangonana no manaja izany, ary tsy mitsabaka amin’ny resaka politika toy ny ataon’ny Hetsiky ...Tohiny